Search အလိုးကားမ်ား - GenFK.com
Sapiens Moe Kyaw Soe
3 Dec 2016 · 116 views
Videoke Sundays @ Kuya Wayne's - brought to you by Mediacom - Call or Text 306-515-3745 for yours today! It's More Fun @ Kuya Wayne's!
Waylyn Botanical Garden Project
13 Dec 2018 · 299 views
ဂ် ပန္ မ ရဲ ့လက္ ဖက္ ရည္ ဧည့္ ခံ ပံု အ ေပၚ ပိုင္း က ေတာ့ လုံ ျခံဳ ပါ ရဲ့ဒါ .. ဒါ .. ဒါ ေပ မဲ့ ..... ဟီ ဟီ ဟီ
ဟားစရာ အူေႀကာင္ႀကား Photos & Videos
Nway Nway Zin
3 Apr 2017 · 1.7K views
အသက် (၁၀) နှစ် ငယ်တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ဖူးစာပါခဲ့တဲ့ ဦး John
"အသက် (၁၀) နှစ်လောက် ကွာတယ်။ အစ်မကို ပိုးတုန်းက ကိုဂျွန် ကို စကား ကောင်းကောင်း မပြောဖြစ်ဘူး။ ငါ့ရည်းစားက ပိုမိုက်တယ် သီချင်းကြောင့်သာ အချစ်ဇာတ်လမ်း စတင်ခဲ့တာပါ" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် John တို့ ဇနီးမောင်နှံ နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Singer John says his wife is 10 years younger than him. #John #CelebrityCouple #MyanmarSinger
3 Apr 2019 · 274K views